Mega3Chewable • Brain growth and development For Children • Zifam Myanmar
Home » Products » Mega3Chewable
Each chewable softgel capsule contains:
Omega-3 Fish Oil 750mg
Equiv. to Eicosapentaenoic acid(EPA) 135mg
Equiv. to Docosahexaenoic acid(DHA) 90mg
Mega3Chewable is an all new product especially designed for young children. It contains essential fatty acids EPA and DHA which are important in normal brain growth and development. It may be beneficial in improving learning ability and behavior patterns,and enhancing memory power.
May assist in maintaining peripheral circulation and promoting general health.
1 to2capsules2to3times daily or at one time to be chewed for great taste.
Mega3Chewable ကလေးအားဆေး
Mega3Chewable သည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ သဘာ၀အတိုင်းရှင်သန်ပေါက်ဖွားသော ဆော်လမွန်ငါးမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဓာတုဆေးဝါး အဆိပ်အတောက်များ ကင်းစင်၍ Omega3Fatty Acids ကြွယ်၀စွာပါဝင်ပါသည်။
Omega3Fatty Acids နှင့် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု
ကလေးငယ်များ၏ ဦးနှောက်ကို အဆီဓာတ်ဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီး Omega3Fatty Acids အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ EPA နှင့် DHA ဟာကလေးငယ်များ ဦးနှောက်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဆီဓာတ်များဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အဓိကကျသော အဆီဓာတ်များကို ခန္ဓာကိုယ်မှ အလိုအလျှောက် မထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် Omega3ကြွယ်၀သော အစားအစာများ (သို့) ဆေးဝါးများကို ဖြည့်စွက်သောက်သုံးပေးမှသာ ကလေးငယ်များ၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လိုအပ်သောပမာဏကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Omega3Fatty Acids ချို့တဲ့လျှင်
-Attention Deficit Hyperactive Disorder
-Dysiexia စသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Mega3Chewable သောက်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
-သင်ယူနိုင်စွမ်း မြင့်မားစေပြီး၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်စေပါသည်။
က​ေလးငယ်များကို တစ်နေ့လျှင် (၁)လုံး၊ (၂) ကြိမ်ကနေ (၃) ကြိမ်အထိတိုက်ကျွေးပေးခြင်းဖြင့် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပြီးထူးချွန်သော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ဖြစ်လာစေပါသည်။
ကလေးငယ်များအတွက် လွယ်ကူစွာ ဆေးတိုက်ကျွေးနိုင်ရန် လိမ္မော်အရသာရှိ ဝါးစားနိုင်သော ငါးကလေးပုံသဏ္ဍန်ချစ်စရာဆေးလုံးလေးများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ဝါးမစားနိုင်သေးသည့်ကလေးများတွင်လည်း ဆေးလုံးကိုဖောက်ပြီး အထဲကဆေးရည်ကို တိုက်ကျွေးပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးတောင့် (၆၀) ပါဆေးဘူး။
No. 95/B, 95 Residence, Kyaik Waing Pagoda Road, 8th Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Postal Code: 11061
+95 (0)19669344, 19669345, 19669346, 19669347
© Copyright 2022. Zifam Myanmar. All Rights Reserved.